Global Voices teny Malagasy » Info-Rhizome: Tatitra momba ny fahaleovantenan’ny fampitam-baovao ao amin’ny tontolo miteny Shinoa · Global Voices teny Malagasy » Print
Voadika ny 24 Febroary 2019 4:46 GMT 1	 · Mpanoratra Oiwan Lam Nandika Harentsoa Tsiky Rakotoson
Sokajy: Hong Kong (Shina), Malezia, Shina, Taiwan (ROC), Hafanam-po, Mediam-bahoaka, GV Mpisolovava
(Lahatsoratra niaingana tamin'ny avrily 2009)
Vao avy nanambara ny fanombohan'ny Info-Rhizome: Tatitra momba ny fahaleovantenan'ny fampitam-baovao ao amin'ny tontolo miteny Shinoa  tao amin'ny interlocals.net aho. Afaka mitroka kopia maimaim-poana eto  ny tsirairay.
Ahitana tatitra momba ny fivoaran'ny haino aman-jery tsy miankina ao amin'ny faritra efatra ny boky: Shina, Hong Kong, Malezia ary Taiwan, izay mifantoka manokana momba ny fandaminana sy ny fanarahamaso ary ny hetsiky ny olom-pirenena amin'ny fanoherana ny fanodikodinam-baovao sy ny ampihimamba amin'ny fampitam-baovao. Ireto ambany ireto misy tsonga avy amin'ny teny fampidirana:
Hu Yong: Ny fikomian'ny mpijery no vokatra ateraky ny krizy ara-drariny amin'ny asa fanaovan-gazety … Hitantsika ny firongatry ny endrika vaovao sy mivondrona amin'ny fahavononan'ny olom-pirenena amin'ny fanarahamaso ny governemanta, ny adihevitra politika ary ny tetipanorona. Amin'ny teny iray, nanjary mpandray anjara mavitrika amin'ny fifanakalozan-kevitra ara-politika, ary mety ho mpiantsehatra eo amin'ny sehatra politika ireo “mpihaino teo aloha”.
Rebecca MacKinnon: Ahoana no ahafahan'ny vondrom-piarahamonin'ireo fampitam-baovao tsy miankina manerana ny tontolo miteny Shinoa hifampizara traikefa, hifanohanana sy hifampiroboroboana?… Hifantoka betsaka amin'ny vondrom-piarahamonin'izy ireo sy ny politika eo an-toerana ve ny haino aman-jery tsy miankina amin'ny teny Shinoa ao Azia? Sa afaka mihoatra ny firenena-fanjakana ary manambatra ireo vondrom-piarahamonina isan-karazany miteny Shinoa miorina amin'ny tombontsoa na finoana iraisana? Inona no ho vokatr'izany?
Feng Chien-san: Mba hanambaràna ny fahaleovantenan'ny fampitam-baovaontsika sy ny safidy hafa, dia mila manana fisainana Sisyphes aloha isika ary matoky fa indray andro any, dia haka indray ny ranomasina sy hamindra ny tendrombohitra isika. Ao anatin'izany ihany, mila miomana hiditra amin'ny fampitam-baovao mahazatra amin'ny alalan'ny ady anaty akata sy ny ady mahazatra isika, mifampitantana tahaka ny Ying sy ny Yang, ao anatin'ny nofy sy ny tena izy.
Misy fampahalalana bebe kokoa azo jerena ato . Ny fidiram-bola rehetra avy amin'ity boky ity dia ho ampiasaina hanohanana ny interlocals.net sy ny famoahana fikarohana momba ny fikatrohana amin'ny fampitam-baovao. Azonao atao ny mangataka  kopia vita printy ho an'ny fikambanana na orinasa misy anao mba hanohanana ny asa.
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2019/02/24/134960/
 Info-Rhizome: Tatitra momba ny fahaleovantenan'ny fampitam-baovao ao amin'ny tontolo miteny Shinoa: http://interlocals.net/?q=node/316